Taariikhda My Butros » 7 Facts Sex doonin afuufa Your Mind
Last updated: Apr. 04 2020 | 2 min akhri
Sex. Dhammaanteen waxaan u ogaado iyo inta badan oo inaga mid ah waxaa ay leeyihiin. Maxay aan ku ogaan saabsan galmada? Maxaa ka ognahay orgasms, size guska, iyo sexercise? Waxaan ku sameeyay liiska 7 xaqiiqooyinka la yaab leh in ka tagi doono adiga iyo saaxiibadaa, kuwii ku caashaqi jiray iyafa.
Fact #1: Marka kacsaday, Celceliska tirada guska waa 5 si ay u 5.7 inches dheer
Sida ay baaritaano dhawaan la sameeyaa iyadoo Paris ee Academy of National Study, Beegidda guys ugu 5 si ay u 5.7 inches dheer iyo 3.9 si ay u 4.1 qiyaastii markii ismaandhaafka. Sidaas lid ku ah Dadku waxay aaminsan yihiin, Dadka badankiis ma leeyihiin a 7 guska inch.
Fact #2: Marka ismaandhaafka siilka naag ayaa dhab ahaan ku kala
Siilka ah celcelis ahaan caadi yahay 3 si ay u 4 inches dheer. Marka ismaandhaafka waxa dhab fidin karaan ilaa laba boqol oo boqolkiiba, sida laga soo xigtay cilmi. Sidaas kiiskan, size dhab macno ah ma.
Fact #3: Orgasms Haweenka socon karaa ilaa 4 jeer ilaa iyo inta ay dad
Celceliska lab lagu naafeeyo waxay soconaysaa ku saabsan 6 ilbiriqsi halka qof dumar ah oo ku saabsan soconaysaa 20.
Fact #4: Soddon daqiiqadood oo galmo caawin doonaa gubashada 200 calories
Sida ku cad qodobka ah oo lagu daabacay Naag ee Day Magazine, galmo noqon kartaa gubasho-calorie sare. Muhiimka ah waxay tahay in la sameeyo galmo kulul oo muddo dheer. Taahaa oo cod caawin kara gubeysa dheeraad ah. Habka kalena waa in ay beddelaan ilaa jagooyinka iyo in xitaa ka badbadinayaan jagooyinka. Tusaale ahaan, haddii aad tahay on top isku dayi dhaqaaqin miskahaaga sida cayaarey caloosha ah. Khubarada ayaa sidoo kale sheegaya in haweenka kuwa uun liibaanay lagu naafeeyo ah marka galmada in ay gubaan calories ka badan u muuqdaan.
Fact #5: Xawaaraha celcelis ahaan of shahwada oo lasii daayaba lab yahay siddeed iyo labaatan mayl saacaddiiba
Jinniyada dedejo; Si kastaba ha ahaatee, mar shahwada geli siilka ay si xoog leh hoos u. Waxay qaadataa manida 5 daqiiqo si aad u samayso 6 safarka inch gaadho afka ilmo-galeenka. Waxa kale oo ay ka qaadi karaan shahwada ilaa 72 saacadood si aad u hesho ukun, sida laga soo xigtay Mark Elliot, oo ah agaasimaha machadka caafimaadka nafsiga iyo Galmada.
Fact #6: Jagooyinka Simple bixiyaan orgasms ugu xooggan
Haddii aad raadinayso ah maskaxda ku-dabayl, sariir-ka buuxa ul lagu naafeeyo in waxyaabaha aasaaska u ah. Sida laga soo xigtay baraha galmo Dorian Solot, marka la isku dayayo cusub, jagooyinka ka adag, Ahmiyadda waa on isku dayaya inaad ogaato miisaanka horjeeddo galmo dhabta ah. Iyada oo ah beddelka yar in ay jagooyinka dhaqanka galmada, waxaad samayn kartaa xataa ka badan orgasmic.
Fact #7: Yoga caawin kara in ay kor u kacsiga, orgasms, iyo qanacsanaanta galmada
Galmo Great waa mid ka mid ah waayo-aragnimada maanka ku-jirka kama dambaysta ah, oo sidaas waa yoga. Ma aha oo kaliya yoga nafisaad keenaysa stress weyn laakiin boosaska qaar loo hagaajiyo dhahana, dabacsanaanta, Socodka dhiigga, oo fur qalbigaaga – waaweynaa oo dhan nolol kulul galmada. Yoga waxay kaloo ka caawisaa in ay baraan mindfulness iyo nololeed ee soo gudbinaynaa, laba iyo waxyaabo kale oo caawiya noqon galmo wanaagsan galmo weyn.